कोरोना संक्रमणबाट सिन्धुपाल्चोकमा एक जना महिलाको मृत्यु भएपछि चार वटा गाउँ सिल गर्दै सेना परिचालन गरिएको छ । ती महिलालाई उपचार गर्न लगिएको बाह्रबिसेको स्वास्थ्य चौकी पनि सिल गरिएको छ । – Sandesh Munch
कोरोना संक्रमणबाट सिन्धुपाल्चोकमा एक जना महिलाको मृत्यु भएपछि चार वटा गाउँ सिल गर्दै सेना परिचालन गरिएको छ । ती महिलालाई उपचार गर्न लगिएको बाह्रबिसेको स्वास्थ्य चौकी पनि सिल गरिएको छ ।
May 17, 2020 170
४ जेठ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट सिन्धुपाल्चोकमा एक जना महिलाको मृत्यु भएपछि चार वटा गाउँ सिल गर्दै सेना परिचालन गरिएको छ । ती महिलालाई उपचार गर्न लगिएको बाह्रबिसेको स्वास्थ्य चौकी पनि सिल गरिएको छ ।
बाह्रबिसे नेगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला पाख्रिनले लकडाउनमा कडाइ गर्न बाह्रबिसे नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ तथा बलेफी गाउँपालिकाका ७ र ८ नम्बर वडामा सेना परिचालन गरिएको बताइन् । बाह्रबिसे ती महिलाको घर हो भने बलेफी उनको माइती हो ।
उपमेयर पाख्रिनका अनुसार बाह्रबिसे बजार पनि आइतबार बिहानबाट पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ । ‘अरु दिनमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री किनबेच गर्न केही घण्टा खोलिन्थ्यो, आज बिहान त बजार पूरै बन्द गरिएको छ,’ उपमेयर पाख्रिनले भनिन् ।
शनिबार बाह्रबिसे नगरपालिका–९ राम्चेकी २९ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युलगत्तै शनिबारदेखि नै जोखिमयुक्त गाउँ र बजार क्षेत्रमा कडाइ गरिएको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलको टोली पनि सिन्धुपाल्चोक गएर अनुसन्धान गर्दै छ ।
बाह्रबिसेकी ती महिला कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने नेपालको पहिलो व्यक्ति हुन् । आइतबार बिहानसम्म नेपालमा २९१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Prevयस्ता ६ गुण हुने युवती हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी ।
Nextबाँकेमा क्वारेन्टाइन बसेका युवकको मृत्यु
बेल्जियमका मेयर तथा सांसदमाथि नेपालीद्वारा आक्र*मण
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83204)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27051)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13100)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12346)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12010)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11755)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11273)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10103)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9676)
आँचल राम्री हुनुको ठुलो रहस्य यस्तो रहेछ
कोरोना भाइरसका कारण सरकारी कर्मचारीको मृत्यु